Modely maimaim-poana ho an'ny Prestashop | Famoronana an-tserasera
Modely maimaim-poana ho an'ny Prestashop
Encarni Arcoya | | Nohavaozina tamin'ny 28/02/2022 23:09 | lohahevitra
Rehefa hamorona fivarotana an-tserasera ianao, ny iray amin'ireo fanapahan-kevitra voalohany tokony hodinihinao dia ny rafitra izay hametrahanao azy. Ny tena fanapahan-kevitra dia ny misafidy eo amin'ny WordPress (sy ny WooCommerce) na Prestashop (na dia misy safidy hafa aza). Fa ny lafiny manaraka dia ny misafidy eo amin'ny maodely maimaim-poana ho an'ny Prestashop na Woocommerce na karama.
Raha nisafidy ny Prestashop ianao ary tsy manana tetibola be hividianana môdely fandoavam-bola (izay no safidy tsara indrindra) dia hamela lisitra misy lohahevitra tsara indrindra ho an'ny Prestashop izahay. Amin'izany fomba izany dia hahatonga ny eCommerce ho toerana manintona kokoa ianao. Hanomboka ve isika?
1 Inona no maodely na lohahevitra ho an'ny Prestashop
2 Ny fanalahidy hisafidianana môdely maimaim-poana ho an'ny Prestashop
3 Ny maodely maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Prestashop
3.1 Leo Trump Fastfood
3.2 OT Jewelry
3.3 Ap Cake
3.4 AP Travel
3.5 Biraon'ny AP
3.6 T-Shirt Leo
Inona no maodely na lohahevitra ho an'ny Prestashop
Raha tsy azonao an-tsaina hoe inona ny maodely na lohahevitra ho an'ny Prestashop dia tokony ho takatrao fa "ny akanjon'ny eCommerceo". Raha lazaina amin'ny teny hafa, io no endrika hanana ny pejinao, amin'ity tranga ity ny fivarotanao an-tserasera.
Noho izany antony izany, rehefa misafidy môdely, ny fandoavam-bola dia atolotra foana satria miaraka amin'izy ireo dia azonao atao ny mifehy 100% ny endrika sy ny fiasa rehetra amin'ny tranokala. Raha ny an'ny maimaim-poana, ny sasany dia manome anao fahalalahana ary ny hafa dia voafetra amin'ny andiana fiasa.
Na izany aza, azonay fa indraindray ny teti-bola dia tsy avo loatra, ary tsy afaka mandoa vola ianao (na dia efa nampitandrina anao aza izahay fa misy ny mora) na tsy manana fahalalana amin'ny fampivoarana izany sy ny fandoavana ny vidiny aloanao.
Na izany na tsy izany, ny maodely maimaim-poana ho an'ny Prestashop dia tsy hevitra ratsy hanombohana, raha mbola ao an-tsainao izao manaraka izao.
Ny fanalahidy hisafidianana môdely maimaim-poana ho an'ny Prestashop
Raha hisafidy lohahevitra maimaim-poana ho an'ny Prestashop ianao, aza maka ny voalohany hitanao sy tianao satria mila izany ianao mba hahafeno fepetra maromaro izay hanampy anao hanatsara, na farafaharatsiny tsy hiharatsy, ny toeran'ny SEO amin'ny Internet anao. fivarotana.
Amin'ny ankapobeny, rehefa misintona lohahevitra maimaim-poana dia tadidio ity lisitra ity:
Ny dikan'ny môdely. Indrindra fa ny Prestashop dia nohavaozina matetika ary mahatonga ny modely sasany hijanona tsy hiasa, na hanome fahadisoana. Raha misafidy dikan-teny mifanentana mihemotra ianao dia mety hampidi-doza izany.
famolavolana mamaly. Io angamba no manan-danja indrindra amin'ireo lohahevitra maimaim-poana ho an'ny Prestashop. Izy io dia manondro ny fampifanarahana amin'ny efijery samihafa: takelaka, finday, sns. mba hijery tsara ny eCommerceo amin'izy rehetra. Raha tsy manana izany ianao dia misintona anao hiverina i Google satria miloka amin'ity karazana endrika ity.
Natao ho an'ny SEO. Izy io dia manondro ny tsy famoronana kaody junk na kaody izay manome lesoka na mahatonga ny tranonkala ho miadana kokoa noho ny tokony ho izy. Raha izany no izy dia afaka manasazy anao i Google, ary sarotra sy lava ny miala amin'ny sazy.
Amin'ny ankapobeny, ny fanatanterahana ireo hevi-dehibe telo ireo dia hanana modely tsara ianao. Fa iza amin'ireo no azonao ampiasaina maimaim-poana?
Ny maodely maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Prestashop
Satria tsy te hampiandry anao intsony izahay, indreto ny sasany amin'ireo maodely eCommerce maimaim-poana izay ho hitanao amin'ny Internet.
Aza avela hamitaka anao ny anaran'ity môdely ity. Raha ny marina dia azo amboarina amin'ny karazana fivarotana tranonkala rehetra izy io, na dia tsy mieritreritra afa-tsy trano fisakafoanana na fivarotana sakafo aza ny fijery.
Ny tena manaitra indrindra amin'ity môdely ity dia ny fandefasana azy haingana dia haingana, mandray andraikitra ary manana takelaka vokatra izay afaka manintona ny mpampiasa anao.
Azonao atao ihany koa ny manana sora-baventy hanambarana ny vaovao sy ny fampidirana ireo tambajotra sosialy.
Hanolotra môdely hafa ho anao izahay izao, miaraka amin'ny fiaviana fotsy tsy misy fotony sy endrika iray izay manjaka ny sora-baventy lehibe ary avy eo ny vokatra.
Averina indray, na dia mifantoka amin'ny firavaka aza ny preview môdely, azonao atao ny manova azy ho zavatra maro hafa. Manana fiasa maro izy io, mandray andraikitra ary maimaim-poana.
Ny hany tsy fahampiana hitanay dia ny hoe, raha te hisintona azy dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny Omegatheme ianao. Saingy ankoatra izany, kandidà lohahevitra maimaim-poana ho an'ny Prestashop hodinihin'izy ireo.
Miaraka amin'ny loko pastel, indrindra ny mavokely, manana ity môdely ho an'ny Prestashop ity ianao. Ny famolavolana dia toa mifantoka amin'ny mofomamy, pies, mofomamy, sns. fa tsy midika izany fa tsy azo ampiasaina, ohatra, amin'ny fitafian'ny ankizy (ho an'ny zazavavy) na amin'ny asa tanana ho an'ny ankizy madinika.
Izy io dia mamaly 100%, manana tonian-dahatsoratra manokana, carousel (ny fahafahana manova ny sary lehibe), fiteny maro, sns.
Na dia mifantoka amin'ny fitsangatsanganana aza ny lohahevitra (sampan-draharahan'ny fitsangatsanganana, ohatra), izany dia tsy midika fa azonao ampiasaina amin'ny fivarotana kojakoja fitsangatsanganana, kitapo, valizy, sns. Manana fiaviana mahazatra izy io ary misongadina ny sary sy ny vokatra. Ankoatra izany, afaka manampy tambajotra sosialy sy bilaogy ianao.
Amin'ity tranga ity isika dia miresaka momba ny iray amin'ireo modely maimaim-poana tsotra sy matotra indrindra ho an'ny Prestashop. Na dia mifantoka amin'ny fivarotana vokatra mifandraika amin'ny birao (fitaovana birao) aza izy io, ny marina dia azonao ampiasaina amin'ny zava-drehetra izany, fa ny sary sy ny logo ihany no ovaina (ho anao).
Raha ny momba ny endri-javatra, dia manana endrika mamaly, kaody SEO, ary entana haingana.
Ity môdely ity dia natao ho an'ny fivarotana akanjo, ary ny marina dia tsy mila manova na inona na inona ianao (ny hany zavatra dia ny manamboatra).
Izy io dia mamaly ary tena mitovy amin'ilay anananao amin'ny alàlan'ny PrestaShop, saingy miaraka amin'ny endri-javatra bebe kokoa sy ny fahafahana manamboatra azy io.
Manana akanjo amin'io fomba io ihany koa ianao, izay azonao jerena (minimal kokoa izany fa izay no mahatonga ny sary hisongadina kokoa).
Mifantoka amin'ny florist, fa amin'ny ankapobeny dia ilaina amin'ny fivarotana voninkazo, zavamaniry, sns. ary koa, fanovana sary, ho an'ny biby fiompy, kosmetika, vokatra vegan, herbalista, sns.
Nankafizinay manokana ity iray ity noho ireo endri-javatra ananany, toy ny fandefasana haingana, menu intuitive (raha toa ka tsy dia manana hevitra firy momba ny tranokala ianao), fiteny maro, milina fikarohana...
Payo dia iray amin'ireo lohahevitra be mpampiasa indrindra ho an'ny Prestashop. Aza manaiky ho voafitaka amin'ny fijeriny fa raha toa ka ho sakafo fotsiny no jerena, raha jerena ny sokajy dia toa fivarotana akanjo. Ary azonao atao ny manamboatra azy io mba hanomezana azy ny fampiasana tianao satria hifanaraka amin'izay ilainao izany.
Inona no misongadina? Ankoatra ny famaliana, dia manana tonian-dahatsoratry ny lohahevitra, fiteny maro, sakafo mitsangana ary ny mety, raha tianao, ny mahazo (eny, karama) miaraka amin'ny fomba pro amin'ny maodely.
Raha tsy misy amin'izy ireo mandresy lahatra anao, ny fanaovana fikarohana amin'ny Internet dia afaka manampy anao hahita vaovao. Mazava ho azy, miezaha mitady foana amin'ny dikan-tenin'ny Prestashop anao mba hisorohana ny olana rehefa mametraka azy. Manoro modely maimaim-poana ho an'ny Prestashop ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Modely maimaim-poana ho an'ny Prestashop
Fiaviana kanto ho an'ny PowerPoint